Ngalaba R&D - Quanzhou Jinjia Machinery Co., Ltd.
1.Igwe ihe ngosi hydraulic zuru ụwa ọnụ a na -ejikarị maka nnwale tensile, mkpakọ na ihu ihe nke ihe igwe.
2.Ihe (pendulum) onye nyocha mmetụta a na-eji achọpụta mmetụta nke ihe igwe na ihe ndị na-abụghị ọla megide mmetụta n'okpuru ibu siri ike iji kpee ikpe njirimara nke ihe ahụ n'okpuru ibu siri ike.
3.Ndị igwe ihe nlele metallographic bụ igwe na-egbochi ihe nlele metallographic site n'iji wiil na-egwe ihe dị mkpa na-agba oke ọsọ. A na -ejikarị ya eme ihe na mbelata ihe nyocha metallographic nke ihe igwe dị iche iche.
4.Mikroskopu metallographic inverted bụ mikroskopu n'elu ọkwa dị elu karịa ebumnobi.
Okwu mmeghe Ngwa ụlọ nyocha
5.The metallographic sample polishing igwe mejupụtara ihe ndị dị mkpa dị ka ntọala, diski, akwa na -egbu maramara, mkpuchi mkpuchi na mkpuchi. A na -edobe moto ahụ na ntọala ya, a na -ejikọkwa aka uwe maka idozi diski polishing na ogwe moto site na kposara.
A na -etinye akwa na -egbu maramara na diski polishing. Mgbe agbanyere moto ahụ site na mgba ọkụ dị na ntọala, enwere ike ịpị ihe nlele ahụ iji mee ka diski polishing na -atụgharị. Mmiri mmiri na -egbu maramara agbakwunyere n'oge a na -eme ka polishing nwere ike ịwụnye ya na efere square nke etinyere n'akụkụ igwe na -egbu maramara site na ọkpọ ọkpọ n'ime eriri plastik edoziri na ntọala. Mkpuchi polish na mkpuchi na -egbochi unyi na irighiri ihe ndị ọzọ ka ha daa na akwa nhicha mgbe igwe anaghị arụ ọrụ, nke na -emetụta mmetụta ojiji.
6.Metallographic sample tupu-egweri igwe, na usoro nkwadebe nke ihe nlele metallographic, igwu ihe nlele ahụ bụ usoro dị mkpa tupu ịchacha ya. Mgbe emechachara nlele ahụ, nkwadebe nlele nwere ike ịka mma.
Emebere arụmọrụ, igwe eji egweri ihe site n'akụkụ dị iche iche nke nyocha na nchịkọta echiche na ihe ndị ọrụ dị iche iche chọrọ. Iji gboo mkpa nke ihe ndị ọzọ tupu igwu ihe, dayameta nke igwe na-egwe ọka nke igwe a karịrị nke ngwaahịa ndị yiri ya, yana ọsọ ntụgharị nke diski na-egwekwa dịkwa ka ngwaahịa ụlọ, ọ bụ ngwaọrụ dị mma maka tupu-egweri samples.